ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ချစ်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးလည်းဖြစ်ပါ စေလို့ ဆုတောင်းရမယ်။ ဆုတောင်း ပြီး ကြိုးစားပြီး ဆန်ကာတင်စာရင်းထဲမှာ ပါတယ်ဆိုရင်တော့. . . Read More
ဆိုင်းမိုင်ဇာတ် လမ်း တွဲက Star Awards ဆန်ကာ တင်စာရင်းထဲမှာပါတဲ့အတွက် တအားလည်း ရင်ခုန်သလို တအားလည်း ဝမ်းသာပါ တယ်။ ညီမအနေနဲ့. . . Read More
ဇာတ်လမ်းတွဲတွေက သရုပ် ဆောင်တွေကို ချီးမြှင့်တာက မရှိသေးဘူး။ အခုလိုမျိုး Star Awards က စတင်ပြီး ချီးမြှင့်တဲ့ အတွက်လည်း အနုပညာရှင်တွေ အနေနဲ့. . . Read More
ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်က နာမည်ကြီးချင်တာ ပဲသိတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ပရိသတ်ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ ဟာတွေပဲ လိုက်လုပ် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အခုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့. . . Read More
လူတစ်ယောက်က ဘယ် လောက်ပဲ တော်နေပါစေ။ ထက်မြက်နေပါစေ။ သူ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုရဖို့ လိုပါတယ်။ လုပ် ပိုင်ခွင့် မရှိရင်. . . Read More
မီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ်ရင်လည်း သု အရမ်းကြီး မမျှော်လင့်ထားဘူး။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်ကိုတော့ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ ရုံတင်တုန်းကလည်း ပရိသတ်တွေအားပေးခဲ့ကြတယ်. . . Read More
အလင်းထဲကို ပြန်လာဖို့ ဘာလိုအပ်လဲလိုအပ်တဲ့ ဘက်က ကူညီဖို့အမွန်း အသင့်ရှိနေ မှာပါ။ အနုပညာရှင်တွေကို လူသိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်မစဉ်းစားပဲ ပိုပြီး ပြောတက်ကြတယ်။ အဲ့လိုမျိုး. . .
ကီလိုမီတာ ၄၇၂ ကီလိုမီတာ ဝေးပြီး ၆နာရီ လောက်မောင်းခဲ့ရတဲ့ အံ့သြဖွယ် ကောင်းတဲ့ သဘာဝအလှ အပတွေ နဲ့အတူ ပေါက် ကွဲပြီး သား မီးတောင်သေကြီး အဝမှာ ရေပြာကန် ရှိနေတဲ့ ...........
အကယ်ဒမီသက်မွန်မြင့်က ဒုတိယရင်သွေးလေးဖြစ်တဲ့ သမီးလေးကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ရက် နေ့က မွေးဖွားခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါ တယ်။ အခုဆိုရင် သမီးလေးက၁၅ရက် သားအရွယ်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ သမီးလေးထပ်ရှိလာပြီဆိုတော့ .....